SLT SPORTS: Ferguson Oo Ammaan Kula Dul Dhacay Van Gaal Iyo Qodobo Kale. | Somaliland Today
← Noloshii Sirta Ahayd Ee Radovan Karadzic Oo Maxkamada Danbiyada Ee Dunidu Ay U Haysato Danbiyo Dagaal.. Qaybti-5aad.
Ardaydii Dhammaysatay Waxbarashada Dugsiga Sare Ee Sheekh Ibraahim Burco, Oo Xaflad Loogu Qabtay Jaamacada Burco.+Sawiro →
SLT SPORTS: Ferguson Oo Ammaan Kula Dul Dhacay Van Gaal Iyo Qodobo Kale.
(SLT-Manchester)-Tababarihii hore ee kooxda Man United Ferguson ayaa si wayn u amaanay tababaraha cusub ee Van Gaal.
Ferguson ayaa sheegay in Van Gaal uu shaqo wanaagsan ka haayo kooxda United waqtigaan la joogo wuxuuna intaa ku daray in Van Gaal uu yahay tababare aad u aqli badan.
“Van Gaal isbadalo dhanka farsamada ah ayuu ka sameeyay Man United, marka aad fiiriso shaqada uu haayo waxaad dareemee inuu haayo wadada saxda ah oo uu dhisayo koox awood badan”.
“Waa tababare aqli badan, wuxuu leeyahay qibrad ku filan oo uu ku tababari karo United koobabna kula guulaysan karo”.
“Waan ku kalsoonahay in Van Gaal uu wax badan kabadali doono United oo uu kooxda ku hogaamin doono wada saxda ah waxaana taas ku tusinaya shaqa uu hada haayo”.
Juventus Oo Lagayaabo Inay Iska Iibiso Arturo Vidal.
Kooxda Juventus ayaa ku fikiraysa inay iska iibiso xiddiga 27 jirka ah ee ree Chile Arturo Vidal.
Laacib kaan ayaa looga soo tagay kursiga kaydka kulankii adkaa ee axadii dhexmaray kooxaha Juventus iyo Roma kadib markii uu ku dheeraad caways habeenimadii khamiista ee ka horaysay.
TuttoSport ayaa sheegaysa in laacib kaan lagu ganaaxay 100 kun oo Euro waxayna intaa sii raacisay in kooxda ay ku fikirayso inay iska iibiso January o hadii ay ku helayso qiimo fiican.
Arturo Vidal ayaa diirada u saaran kooxda Man United ee dalka ingiriiska waxaana la filayaa inay dalab rogaal celis ah ka gudbin doonto suuqa kala iibsiga ee January .
Waa Maxay Sababta Ka Dambaysa Fabregas Inuu Dib U Helo Qaabciyaareed Kiisii Fiicnaa?.
Fabregas oo ku soo barbaaray Arsenal ayaa noqday mid ka mid laacibiinta ugu fiican booskiisa lakiin markii uu ku biiray Barcelona waxaa hoos u dhawc wayni uu ku yimid qaab ciyaareed kii looga bartay.
Fabregas ayaa dib ugu soo laabtay horyaalka ingiriiska kadib 3 xiliciyaareed oo mugdi ahaa oo uu la qaatay kooxda Barcelona lakiin laacib kaan ayaa dib u helay qaab ciyaareed kii uu ku caan baxay.
Hadaba Waxaan Soo Bandhigi Doona Afar Sabab oo ka dhigtay Fabregas inuu dib u helo qaab ciyaareed kiisii Fiicnaa:
1-Booskiisa Rasmiga Ah Oo Uu Si Joogto Ah Uga Ciyaaro:
Fabregas ayaa booskiisa rasmiga ah si joogto ah uga ciyaara kooxda Chelsea taas oo keentay inuu soo ceshto qaab ciyaareed kii halista ahaa ee logabartay.
tusaale ahaan xiligii uu joogay Barcelona waxaa laga ciyaar siin jiray boosas kala duwan oo uu san horay uga ciyaarin waana sababta keentay inuu ku yimaado hoos u dhac waqtigii uu la qaatay kooxda ree Spain.
2-Kalsooni Iyo Isagoo Dareemaya Inay Masuuliyad Saarantahay:
Fabregas waa laacibka ugu horeeya ee la soo hadal qaadayo marka laga hadlayo laacibiinta ugu wanaagsan kooxda Chelsea waxaana saaran masuuliyad ah inuu guulo ku hogaamiyo kooxda isagoo adeegsanaya farsamooyinkiisa gaar ka ah iyo waliba isagoo kalsooni buuxda ka haysta tababarihiisa.
Lakiin xiligii Barcelona laacib kaan ma haysan kalsoonida tababarayaashii soo maray kooxda sidoo kale waxaa joogay laacibiin kamagac wayn isaga sidaas darteed masuuliyad badan dusha kama saarnayn 3-dii sano ee uu la joogay Barcelona.
Fabregas ayaa ku soo barbaaray magaala madaxda ingiriiska ee London wuxuuna ku qaatay 8 sano lakiin laacib kaan ayaa dhibaato kala kulmay laqabsiga nolosha magaalada Barcelona.
Laacib kaan ayaana dib ugu soo laabtay jawigii uu ku soo barbaaray taas oo keentay inuu dareemo daganaan badan oo ka caawisay inuu ku raaxaysto ciyaarista kubada cagta.
4-Qaab Ciyaareed Ka Chelsea:
Sida lawada ogyahay qaab ciyaareed ka Chelsea wuxuu aad uga duwan yahay kan kooxda Barcelona kaas oo ah in aad kubada baasto lakiin Fabregas ayaa ah laacib jecel inuu kubada la raadiyo weeraryahanka kooxda.
Xitaa waqtigii uu joogay Arsenal Fabregas wuxuu haystay xuriyad uu kubada ku siin karo weerar yahanka afka hore ka ciyaaraya lakiin xiligii Barcelona waxaa aad ugu adkeed inuu weerar yahan kubada la raadiyo maadama Barca ay ciyaarto intabadan weerar yahan aan rasmi ahayn.
Laurent Koscielny Oo Ku Biiray Liiska Dhaawacyada Arsenal
Kooxda Arsenal ayay dhibaatadu ku sii badanaysaa iyadoo difaaca ree France ee Laurent Koscielny xulkiisa dhaawac looga saaray.29 jirkan ayaa dib ugu soo laabanaya magaalada London si looga daaweeyoo dhaawaca soo gaadhay isla markaana baadhitaan dheeraad ah loogu sameeyo. 24 saacadood oo kaliya ayaa ka soo wareegay markii la shaaciyay in Mesut Ozil uu garoomada saddex bilood ugaga maqnaan doono dhaawac jilibka ka soo gaadhay.
Koscielny ayay ahayd inuu ciyaaro kulanka saaxiibtinimo ee France iyo Portugal kaas oo ka dhici doona Paris, laakiin wuxuu awoodi waayay inuu la qaato tababarka kooxda xulka qaranka France taas oo tababare Didier Deschamps ku qasabtay inuu difaacan dib ugu celiyo Arsenal si baadhitaan dheeraad ah loogu mariyo London.
Inkasta oo ay Gunners Ozil waayi doonaan inta ka hadhay sanadkan ayay ku kalsoon yihiin inuusan dhaawaca Kosielny noqonin mid halis ah, waxayna ku rajo wayn yihiin inuu taam unoqn karo kulanka ugu soo horeeya horyaalka ee Hull City.
In Arsenal hal kulan oo kaliya ay waydo Koscielny ayay madax xanuunku keeni doontaa Arsene Wenger, wuxuuna Kosielny ka mid yahay labada difaac dhexe ee kaliya ee hadda ka midka ah kooxda Gunners. Mathieu Debuchy ayaa dhaawac ku maqan halka Calum Chambers uu kulanka ugu soo horeeya ganaax ku maqnaan doono.